I-China SHX ejikelezayo Abavelisi beebhedi zeBhedi zaBathengi nabaThengisi | Iiringi ezibini
Itekhnoloji yokujikeleza kwebhedi ejikeleze amanzi (CFBC) ayifani nabanye kuba inezinto ezahlukileyo ezingaqhelekanga.
Umzi mveliso: Isityalo samandla
Ungcelele lweesetyhula zeBhedi yokuBuya
INTSHAYELELO KWIINKONZO ZE-SHFX ISETYHULA IMVUZO YOKUHAMBA KWEBhedi:
I-boiler ye-SHX CFB: umthamo wokukhupha i-10-35t / h, ngoxinzelelo lwomphunga we-1.25-2.5MPa kunye nesitovu kunye nesitovu eshushu.Hot Water Boiler 14 ~ 39MW, 130 ℃ / 150 ℃ hot wat, phantsi koxinzelelo lwe-1,3 ~ 1.6MPa; Iqondo lobushushu lamanzi elibuyayo yi-70 ℃ / 90 ℃ Itekhnoloji yeCFBC, eluhlobo olutsha kwaye ikhule ngokuphezulu, ungcoliseko oluphantsi kunye netekhnoloji eluhlaza, inezinto ezininzi ezifanelekileyo, ezingafumanekiyo kwenye indlela yokumelana.
I-CFB yeyento yokudibana kobushushu obuphantsi, ke ngoko, ukuphela kwe-nitrogen oxide kuncinci kakhulu kunombala wamalahle omlilo wamalahle, kuphela ngo-200ppm phantse; kwangaxeshanye, kuyenzeka ukuba kufezekiswe ngokuthe ngqo ukukhutshwa ngokupheleleyo kwezinto ngexesha lokuhlangana, ukusebenza ngokugqibeleleyo kuphezulu. izixhobo zilula kwaye zinexabiso eliphantsi ngokunjalo.Ukuqala kokuchithwa kunye nokusebenza kweendleko kungaphantsi kakhulu kune-PC + FCD.
Ulungelelwaniso olufanelekileyo lweoyile kunye nokudibana okuphezulu ngokufanelekileyo, ngokufanelekileyo kufanelekile kumalahle aphantsi eekhalori.
Isilinda esidiniweyo sisebenza ngcono, sinoxanduva lokuqinisekisa ukusetyenziswa ngokudibeneyo kwaye simahla kungcoliseko.
Uluhlu olubanzi lohlengahlengiso lwendlela, umthwalo ophantsi unokuhla ukuya kwi-30% malunga nomthwalo wenqanaba.
Okwangoku, iimfuno zokukhusela okusingqongileyo ziba ngqongqo mihla le, kwaye uhlengahlengiso lomthwalo wombane kumzi-mveliso wombane uba mkhulu, iintlobo zamandla amalahle atshintshayo, ukutshisa ngokuthe ngqo kwamalahle ekrwada kuthatha umlinganiso ophakamileyo, uqoqosho lwesizwe lukhula ngokungalinganiyo kumanqanaba ohlukeneyo, ukungqubana phakathi kwendalo Ukukhuselwa kunye nokutsha kwamalahle kuphuma yonke imihla ngaphezulu, ibhoyila yeCFB ibe lukhetho lokuqala lokusebenza okuphezulu kunye nongcoliseko oluphantsi iteknoloji entsha yokutsha.
Edlulileyo: SHL Bulk yoBume boShishino
Okulandelayo: Igesi yeoyile yeoyile yeoyile yeoyile
isitya samandla esisebenza ngombane
I-DHL Corner Tube Ininzi yeBhobho yamanzi ePompo
I-DHL yecandelo lekona ityhubhu yohlobo olunobhobho wamanzi umbhobho we-DHL Series ikona-ityhubhu yombhobho wamanzi luhlobo lombhobho wamanzi wombhobho ohonjiswe ngezantsi ngathi ungafakwanga kumacala awo amane kwaye uzixhasa ngokwakho ngesigubhu esingaphambi komgqomo okanye isigubhu esinye esidlulayo. Sizilungiselele ngokupheleleyo ithiyori esisiseko, iipropathi zemveliso kunye neenkqubo zokuyila zolu hlobo lwebhoyila. Ukudibanisa iimpawu zamalahle zelizwe lethu ngokumba okuqhubekayo, qhu ...
I-SHF Amalahle eenqanawa zamanzi e-Syl
Intshayelelo: Njengohlobo olutsha lomsebenzi ophezulu ovuthiweyo ngetekhnoloji yamalahle ecocekileyo ephantsi. Itekhnoloji yokujikeleza kwebhedi ejikeleze amanzi (CFBC) ayifani nabanye kuba inezinto ezahlukileyo ezingaqhelekanga. 1. Umbhede ojikelezayo owenziwe ngesangqa ngowokukhanya kobushushu obuphantsi, ngenxa yoko iitrogen oxides ezikhutshwayo ze-boiler zisezantsi kakhulu kunombane wamalahle-umgubo werhasi, kwaye ezo boiler zinokuthi ngqo zichithe ixesha lokudalwa. Ukujikeleza umkhuhlane ...
I-SZS Fulverised Coal Boiler I-boiler enamanzi ashushu
SZS WOTHOTHO AMalahle STEAM KUNYE AMANZI AMANZI AMANZI OKUSHISELA AMABHODI Iimpawu zemveliso 1. kugxilwe kunikezelo lokusila amalahle okusila uxinizelelo amalahle, unikezelo olumanyeneyo ziingqusho, umgangatho wamalahle nozinzo. 2. Indawo enobungane; Yonke inkqubo ivaliwe ngokuzenzekelayo kumalahle, uthuli oluxineneyo, akukho luthuli luqhubayo 3. Ukuqala kwe-boiler nokuma ngokulula: inkqubo ye-boiler inokuqatshelwa kukuba kuvulwa okanye kuyekwe. Imizuzwana engama-30 ukunqunyulwa ...
SHL Bulk yoBume boShishino
Bulk series umphunga wamanzi ashushu kwibhoyila. Iisilinda ezinqamlezayo eziphezulu nezingaphantsi zombhobho kunye neendonga zokupholisa amanzi zidibene zenza uhlobo lwesithando somlilo, kunye nesixokelelwano sombhobho wokuqokelela kunye nesifuba sokuqokelela ukwenza isakhelo somzimba se-boiler.Ngasemva komhla ...